Fumanisa ukuba loluphi uhlobo lweMicrosoft .NET Isakhelo esinaso | Iindaba zeGajethi
Uyazi njani ukuba loluphi uhlobo lweMicrosoft .NET Isakhelo esisifakileyo
Isakhelo seMicrosoft .NET liqonga elisetyenziswa ngokubanzi ngababhekisi bezicelo abaxhomekeke kwimisebenzi yabo ukuze izindululo zabo zisebenze ngcono kwiinguqulelo ezahlukeneyo zeWindows.
Ukuba asinayo inguqulelo yangoku okanye echanekileyo kwiWindows, isicelo sinokuyeka nje ukusebenza okanye sibe nokungangqinelani okumbalwa; singanika umzekelo omncinci kwifayile ye- oomatshini ababonayo, yeyiphi baxhomekeke ikakhulu kule Microsoft .NET Isakhelo seqonga.
Kutheni le nto iMicrosoft .NET Framework ifakwe kwiWindows?
Ukuba usebenze ixesha elide kuhlobo oluthile lweWindows, usenokuba uqaphele ukuba xa uvula isikhangeli se-Intanethi ukuphonononga ezinye iividiyo ezivela kuYouTube (okanye nayiphi na enye ingosi), umyalezo ubonakala ucela ukuba ufakelwe I-Adobe flash playerkuhle ngaphandle kokuxhasa ukuveliswa kwakhona kweevidiyo ngekhe kwenziwe nangawuphi na umzuzu; imeko efanayo kakhulu iyenzeka nge Imidlalo esekwe kwiJava, yiyo loo nto ifuna iJava Runtime njengomphelelisi. Ayisiyo mishini yenyani ebaleka kwiWindows efuna iMicrosoft .NET Isakhelo, kodwa endaweni yoko, iindidi ezahlukeneyo kunye nokwahluka kwezicelo, kwaye ke kufuneka uzame yazi ukuba loluphi uguqulelo olufakelweyo ngoku kwiWindows, esiza kuyifumana ngayo nayiphi na enye indlela esiza kuyikhankanya apha ngezantsi.
1. Isoftware yeNET yesoftware
Ukuba ufuna isisombululo esikhawulezileyo nesisebenzayo sokufumana olu lwazi, sicebisa ukuba kusetyenziswe "i-ASoft .NET Version Detector", isixhobo esiza kusazisa malunga neenguqulelo zeNET Framework esiyifakileyo kwiWindows.
Ukuba akukho nanye kuzo, esi sixhobo siza kubonisa ikhonkco eliza kusikhokelela kwiwebhusayithi yeMicrosoft ukuze sikwazi ukuyikhuphela. Ngenxa yokujongana nayo kunye nemisebenzi elula kakhulu kubasebenzisi, oku kunokuba yindlela yokuqala kwabo bangenalo ulwazi oluninzi ngeli qonga; Kuya kufuneka ujonge ngaphambili ukuba ikhonkco liya kukusa kwiwebhusayithi yeMicrosoft, ibe ngumsebenzisi oya kuthi akhethe ukukhuphela kwifayile ye- Inguqulelo ye-32-bit okanye engama-64-bit.
2. Umvavanyi weNET
Ngaphandle kwento yokuba esi sixhobo sihlaziyiwe ukuze sisebenze ukuya kuthi ga Windows 7, isasetyenziswa nangoku yazi ukuba loluphi uguqulelo lwesakhelo seNET Yile nto ayifakileyo umsebenzisi kwinkqubo yokusebenza. Mhlawumbi isiphoso esincinci kukuba esi sixhobo asiliboni ithala leencwadi le-AOD (Izinto eziSebenzayo zeDatha) lelinye lamacandelo eSakhelo seNET.
Ukongeza kulwazi olunikiweyo kunxibelelwano lwesi sixhobo, umsebenzisi unakho fumanisa uhlobo lwenguqulelo lweInternet Explorer ozifakileyo kwiWindows yakho. Ukuba ufuna ukuba lonke olu lwazi luhlangulwe kwifayile, ungasebenzisa umsebenzi wayo ukuyikopa kwibhodi eqhotyoshwayo, eya kuthi kamva isetyenziselwe ukuyithumela ngoxwebhu nge-imeyile kuye nakubani na oyifunayo.
3. Ukulawulwa ngesandla kwesakhelo seNET
Nangona kuyinyani ukuba ezinye iindlela esele sizikhankanyile ngasentla zilula ukusombulula kuba umsebenzisi kufuneka enze unqakrazo olumbalwa kumaqhosha ojongano lwabo, kukho enye into enokuthi ithathelwe ingqalelo njenge "ncwadana". Oku kungenxa yokuba ngaphandle kokufaka okanye ukuqhuba usetyenziso oluphathekayo, sinokuphonononga idatha ngaphakathi kwezicelo ezifakwe kwiWindows.
Ngale nto kuya kufuneka siye:
Khetha ukhetho "Iinkqubo kunye neempawu"
Khetha ukhetho "Yenza okanye Khubaza iiWindows."
Emva kokwenza lo msebenzi uya kuqaphela ukuba kwicala lasekunene kuya kuboniswa iziphumo ezimbalwa, kubandakanya nezo zisibonisa Inguqulelo yeNET Framework esinayo ngoku; Kukho ezinye iindlela ezizezinye ezinokusetyenziselwa ukufumana ulwazi oluthembekileyo, nangona umsebenzisi we-novice engadingi ukuzazi ezi ndlela, ngelixa umsebenzisi okhethekileyo kwisayensi yekhompyuter, ngokuqinisekileyo sele sele ezazi kakuhle apho kufuneka aye kwirejista inkqubo yokusebenza ukufumana olo lwazi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Uyazi njani ukuba loluphi uhlobo lweMicrosoft .NET Isakhelo esisifakileyo
Uyikhupha njani iaudiyo kwividiyo kwaye uyiguqulele kwenye eyahlukileyo
Uyibuyisa njani i-MBR eyonakeleyo engayi kuvumela iWindows ukuba iqale